Docker ဆိုတာ ဘယ်လို software container platform မျိုးလဲ ? - MiteLar
Docker ဆိုတာ ဘယ်လို software container platform မျိုးလဲ ?
Docker ဆိုတာ software container platform တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Docker container ဟာ ဘာတွေလုပ်သလဲဆိုရင် application တွေကို run ဖို့၊ develop ဖို့၊ ship ဖို့ လုပ်ထားတဲ့ open source platform တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Docker container တစ်ခုဟာ application တစ်ခုကို packaging တွေ runningတွေ လုပ်ဖို့ environment တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်ပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ computing တစ်ခုကိုရနိုင်ဖို့ဆိုရင် Docker မှာ application တစ်ခုကို side by side ယှဥ်လျက် run နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် Single Host တစ်ခုမှာပဲ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့ containers တွေကို run နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီ containers တွေကိုပဲ run ထားတဲ့ host ကနေ တစ်ခြား host တစ်ခုဆီကို ပြောင်းရွှေ့ နိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Docker Engine ဟာဆိုရင် Docker ရဲ့ core ဖြစ်ပြီး Docker containers တွေကို create ပြုလုပ်ခြင်း၊ shipping လုပ်ခြင်း၊ run ခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။Docker Engine တွေက Client- Server architecture အရ
• Server daemon process တစ်ခုဟာအမြဲတမ်း run နိုင်ခြင်း။
• ကျန်ရှိသော API ဟာ daemon တွေကို ချိတ်ဆက်ပြီး instruction တွေ ကို Server တွေဆီ ပေးပို့ခြင်း။
• Command Line Interface (CLI) အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
Docker မှာ ဘယ်လိုမျိုးအရာတွေရှိလဲ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။Docker မှာ ပါဝင်အရာတွေ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးပါတယ်။Docker မှာ ဆိုရင်
Docker image ဆိုတာကတော့ container တစ်ခုမှာ လိုချင်တဲ့ application တွေကို အသုံးပြုလို့ရအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ file တစ်ခုပါပဲ။
Dockerfile ဆိုတာ နာမည်အတိုင်းပဲ file တစ်ခုပါပဲ။ သူ့ဆီမှာ တိကျတဲ့ instructions တွေပါမယ် အဲ့ instructions တွေနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ customized images တွေကို build လုပ်ပါတယ်။
Docker containers တွေထဲမှာဆိုရင် servicesတွေက သီးခြား port တစ်ခုစီပေါ်မှာ run လေ့ရှိပါတယ်။ port တစ်ခုပေါ်မှာ run နေတယ် containerရဲ့ services တွေကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင် container ရဲ့ port ကို Docker host ရဲ့ port တစ်ခုခုနဲ့ bindပေးရပါတယ်။
Docker မှာ Network တွေကို docker containers နှင့် ဆက်သွယ်ဖို့အတွက် create နဲ့ manage လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ docker network command ကို အသုံးပြုပြီးတော့ Docker network ကို manage လုပ်လို့ရပါတယ်။
Docker Compose ဟာဆိုရင် Containers များကို Setup ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် Tool တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Docker Compose ကိုသုံးခြင်းဖြင့် docker containers များကို Compose File တစ်ခုအနေဖြင့် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Images and Containers များကို လည်း Single Command ဖြင့် လွယ်ကူစွာ build လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Docker Machine သည် Command Line Tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး Dockerized Hosts များကို Provisioning and Managing ပြုလုပ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် Virtual Machine များကို Docker Engine နဲ့ Local or Remote System အတွက် Install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Docker Machine တွေဟာ Virtualbox, Vmware, Digital Ocean နှင့် Amazone AWS စသည့် Platform တွေပေါ်မှာလည်း ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆို docker ကသူအသုံးမပြုတော့တဲ့ objects တွေကို သူ့ကိုဖျက်ပါလို့မပြောမချင်း မဖျက်ဘဲ ဒီတိုင်းထားထားတတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ objects ဆိုတာ docker နဲ့ဆိုင်တဲ့ images, containers, volumes နဲ့ network တို့ကိုပြောတာပါ။ ဒါကြောင့် သူ့မှာ unused objects တွေကိုဖျက်ပစ်ဖို့အတွက် option တစ်ခုထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ docker prune ဆိုတဲ့ command ပါ။